KUKHO UBUFANANTSO OBUNGCONO BEMOVIE KUNEMVA NANGE-50 SHADES - EMVA
Ndiya Kuhamba Ebumnyameni Hbo
Usuku Lwabalindi Bamandla Esizwe
Ngaba singacela ukuKwenza iiMovie ukuba zibengathi ziFanfiction ezingcono kunasemva kunye neeShades ezingamashumi amahlanu?
Xa itreyila Emva Ndiqale ndalahla kuluhlu lwam lwexesha lika-Twitter, ndiyikrweqe ndaligqithisa ndinomdla omncinci. Iitweets ezimbalwa ziyibiza njalo Amashumi amahlanu eeShad kuba ulutsha lubambe iliso lam, kodwa alonelanga ukujonga kufutshane. Ke i-tweet yokuqala yavela yatyhila ukuba ewe, oku bekusekwe kwiHarry Styles / I-OC ubumnandi obupapashwe kwiWattpad, kunye nabafundi, ndiqale ukunikela ingqalelo.
Njengomdlalo omkhulu engahlawulwayo , Kwafuneka ndibone ukuba yonke le ngxabano ingantoni.
Kuya kuvela ukuba Emva baqala ubomi njengobungqina kwiWattpad ngumbhali ogama linguAna Todd; Isishwankathelo sencwadi ngekratshi liqhayisa , Ngoku ihlaziyiwe kwaye yandisiwe, ka-Anna Todd's Emva I-fanfiction yaqokelela i-1 yezigidigidi efundwayo kwi-intanethi kunye nabafundi abathandwayo kwihlabathi liphela. Fumana amava athethwe kakhulu ngencwadi ye-Intanethi!
Kungenxa yokuba into ethandwayo kwi-Intanethi ayithethi ukuba ayifanelekanga ukuba ibe ngumshicileli-okanye, ewe, ixesha lomfundi- kunye nomzamo. Khumbula ukusilela Shit Utata Wam uthi Imdidlalo eqhubayo yeTV? Ewe, nam andizami.
Incwadi ifundeka njengawo onke amanye amabali othando, ane-shades ze Ngorhatya kwaye, ke, Amashumi amahlanu eeShad . Umfundi wekholeji uTessa, onesoka elizinzileyo kunye nezicwangciso ezinkulu, udibana noHardin oyingozi (owayenguHarry) kwaye kwangoko wawa phezu kwakhe. Isishwankathelo sichaza indlela emhlukumeza ngayo ngokweemvakalelo kuyo yonke le ncwadi, kodwa ibalaselisa indlela uTessa angenakunceda ngayo kodwa azive etsala kuye, kuba akukho nto ithi ukuthandana njengamadoda ayityhefu anetyhefu.
I-trailer yefilimu ithatha inyathelo eliya phambili ngokuchaza ukuba, kuba uHardin liqabane lokuqala likaTessa lokwabelana ngesondo, uye wamtshintsha ngokungenakuphikiswa, eyindlela nje enengxaki kakhulu ekubhaleni emva kweholide.
Ifilimu bububi obungathandekiyo beetrope ezinengxaki ezinokuthi ziye kumhlaba oyingozi kudumo lwabantu abadumileyo bokwenene ababandakanyeka kulo msebenzi; Izitayile zinamahemuhemu okuthintela uTodd kwi-Twitter. Into yokugqibela nabani na ayifunayo lelinye ibali eliqaqambisa ubudlelwane bokuhlukumeza kwaye ubabonisa njengeempawu zothando lokwenene. Kukho okuninzi kokuphononongwa okuhle kokukrazula incwadi ngokwahlukileyo, ke masisondele kwinqanaba elitsha: ayisiyonto intle yenkcubeko.
Intsingiselo yobugcisa ayinasiphako. Zininzi izinto ezimbi ezijikeleze uluntu olunetyhefu kwaye ziyingozi, kodwa kukwakhona okuhle okuninzi okuvela kwi-fic. Ehlabathini lonke, ababhali basebenzela ukuhambisa amabali asimahla, kuseto lwendawo oyithandayo kunye nokubandakanya abalinganiswa bakho obathandayo, kuwe.
Uninzi lwazo luphendula kwiingxaki kwingxelo esemthethweni, okanye ukulungisa ukungabikho komelo. Ayisiyo-erotica nje, nangona kungekho nto iphosakeleyo kwabo bakhetha ukubhala i-smutty-shots one okanye ezothando ezinde, nokuba.
Umbono weqhekeza lobungangamsha uthandwa kangangokuba ube ngumsebenzi opapashiweyo okanye oguqulwe waba ngumdlalo bhanyabhanya uyamangalisa, kwaye ayisiyiyo into endakha ndayibona kwangaphambili ukuba yinxalenye yencoko ngaphambili Amashumi amahlanu eeShad weza kunye. Singena kwindawo emnyama apha apho amanye amabali endalo ngoku anokuguqulwa abe yimisebenzi yoqobo kunye notshintsho lwamagama ambalwa. Ke ngoku ukuba le yinto eyenzeka rhoqo, singaqala nini ukukhetha fanfic elungileyo yokuziqhelanisa nescreen esikhulu?
Amashumi amahlanu eeShad kwaye Emva Zombini ziintsomi ezixelwa kakubi zokuxhatshazwa. Undixelela ukuba akukho nanye ebhalwe kakuhle eFinn / Poe shop shop AU enokuguqulwa ibe yifilimu eneenguqu ezimbalwa? Okanye i-AU yekholeji eMarvel ebonisa oonobumba abaphambili?
Kukho amabali amaninzi ahlukeneyo onokukhetha kuwo ukuba abalinganiswa abaqhelekileyo ngokungacacanga kuseto olutsha ezingezizo nje iingcinga zokulawula amadoda, eziqulethe abalinganiswa abaphambili kwiindima ezibalaseleyo kunye nezothando, kodwa okwangoku, kubonakala ngathi ukuphela kwentsomi Imicimbi esesikrinini ngamabali anyathela umhlaba owaziwayo, onengxaki.
Emva ijongeka imbi, icacile kwaye ilula. Ukuba ufuna fanfiction elungileyo, kulula kakhulu ukuyifumana. Sukuxhasa olu hlobo lokubaliswa, endaweni yoko baxhase ababhali abaxelela amabali ofuna ukuwafunda. Yiloo nto eyona fanfiction yenzelwe yona.
(umfanekiso: Imifanekiso yeAviron)
Ingubo Kunye Nekrele
Iimfazwe zeenkwenkwezi vs iinkwenkwezi zokuhamba kwamantombazana
U superman u-maria umangalela
ubusuku (dc comics)
imifanekiso yeligi yobulungisa
kufuneka sitye iintsana